SIDA LOO CABBO BALSAM IYO SIDA LOO QUUDIYO GURIGA LOOGU TALAGALAY UBAX BADAN, SIDOO KALE WAXA QALADAAD U SAMEEYAAN BANNAANKA U SAMEEYAAN DARYEEL IYO SIYAABO LAGU BACRIMIYO GEEDKA? - GURI, GURI
Balsam - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha, waxaa sidoo kale loo yaqaan 'asterisk, light, Vanka-vstanka, Vanka qoyan, ka baxsan. Ubax Tani waxaa loo yaqaanaa noocyada kala duwan ee noocyada, kala duwan ubax badan, mararka qaarkood xitaa jiilaalka, iyo daryeelka aan qabyo ahayn.
Waxay ku jirtaa ubaxyo fudud ama laba jibbaar ah midab kala duwan, mararka qaarkood waxay leedahay laba midab oo midab leh. Balsam waa la jecel yahay oo keliya ubax guri, laakiin sidoo kale wuxuu si ballaaran u aasaasay geedka beerta, waxaana badanaa loo adeegsadaa beerista bannaanka, beeraha qurxinta, beeraha iyo sariiraha ubaxa leh ubaxyo waaweyn. Iyada oo dhammaan shuruudaha daryeelka iyo quudinta, waxaad u bogi kartaa ubax ah muddo dheer.
Balsam wuxuu u baahan yahay waraabin badan oo badan. Guga iyo xagaaga, xayawaanka waa in la waraabiyaa maalin kasta, ka hortagidda ciidda ka qalajinta. Xayiraadda dheriga qoto dheer waxay gacan ka geysan doontaa bixinta qoyaan ciid ah oo ka fiican oo dheer. Iyada oo waraabinta ku filan, ubax suurad wacan afkoda ayaa lumin kara bacriminta. Xilliga jiilaalka, waraabinta waa in la sameeyaa mar saddex maalmood ama laba jeer toddobaadkii, sida ciidda u engegay.
Ma oggolaan karno dhirta dhirta, oo leh istaabashada qoyaanku waxay u muuqan kartaa mid yaryar, sciarides. Biyaha waraabinta waxaa loo isticmaalaa sidii la kariyey oo la taaban karo, laakiin ugu horreyn waa lagama maarmaan in la sugo dhawr maalmood. Daadi ubaxa guriga waa inuu ahaadaa haddii heerkulka hawada ee qolka uu ka sarreeyo qiimayaasha 20-22 ° C, xaaladaha kale waxay noqon doontaa mid ku filan oo keliya si loo hubiyo in ciidda dheriga uusan ku qallajin.
Haddii balsamku ku baxo berrin furan, ka dibna waraabinta ayaa maalin walba la sameeyaa iyaga oo ku buufinaya. Faa'iidada nidaamka noocan oo kale ah waa awooda looga hortago dhacdooyinka cayayaanka, gaar ahaan caarada caarada. Biyaha carrada ku haboon si aad uga fogaato qalajinta ciidda iyo dayrta ubbooyinka. Waxa kale oo aan loo baahnayn in lagu soo wareejiyo: xididada ayaa laga yaabaa inay qudhuntid. Waraabinta waxaa si fiican loo sameeyaa fiidkii, ka dib qorrax dhaca. Habeen qabow ah, qoyaanku ma uumi-baxo oo si wanaagsan loo ilaaliyo carrada.
Goorta iyo waxa la quudiyo?
Laga bilaabo May ilaa Sebtembar, marka balsam uu si firfircoon u korayo ubaxu wuxuu bilaabmaa, waa in la helo bacarin dheeraad ah oo loogu talagalay horumarinta buuxda ee ubaxa. Iyadoo bilawga xilliga dayrta, quudinta ayaa la joojiyay. Sidoo kale, bacrimiya dhirta bukaanka ah, iyo kuwa dhawaan la soo dhajiyay. Haddii ay dhacdo in tallaalka, Bacriminta aan la isticmaalin horaantii ka dib 3 usbuuc ka dib (sida loo bedelo balsam iyo daryeel isaga ka dib markii laga beerto digsi kale, halkan ka akhriso).
MUHIIM! Haddii balsam go'aansaday in ay Bloom xilliga qaboobaha, waxay sidoo kale u baahan tahay in la quudiyo, ka dib markii buro ayaa u muuqda. Isticmaal xalka macdanta yar ee diirada saara ujeedadan, adoo ku daraya ciidda kadib markaad waraabiso.
Maxaa iyo sida loo bacrimiyo?
10-kii maalmoodba mar waxaad u baahan tahay inaad balsam ku darsato bacriminta macdanta oo buuxa. Ma sameyn kartid dhar qorrax leh, haddii kale iska ilaali inaad gubto xididada. Ka hor inta aan la quudin, ubaxa waxaa la waraabiyaa biyaha caadiga ah ka dibna bacriminta, kaas oo nitrogen, fosfooraska iyo potassium waa lagama maarmaan.
Bacriminta Vanka ma aha oo kaliya xididada, laakiin sidoo kale ku buufin caleemaha (bacarimiso foliar), gaar ahaan gooyn yaryar. Si arrintan loo sameeyo, bacriminta waxaa lagu qasi karaa sida ku qoran tilmaamaha biyo jilicsan, oo ah 2-3 ° heerkulka qolka oo lagu buufiyo dusha sare ee caleenta oo dhan. Stomata on caleemaha geedka nuugaya nafaqooyinka in si dhakhso ah loo socodsiiyey photosynthesis.
Isku day inaad quudiso xayawaanka beddelka ah iyo Bacriminta fosfatiga.
Waxyaabo badan oo Bacriminta kala duwan ayaa ka muuqda suuq casri ah, sidaa darteed ma jiri doonto dhibaato la xidhiidha doorashada iyo iibinta bacriminta saxda ah ee "saboolnimada". Si kastaba ha ahaatee, marka la eego dhammaan kala duwanaanshahan, waxaa fiican in la fiiriyo Bacriminta adag ee dhirta ubaxyada ornamental. Bacriminta-caanaha, uniflor-burooyinkeeda, Agricola ee ubax, Jolly Flower Girl for ubaxyada iyo balconi ubaxa, ama Girl Jolly ubaxa for violets iyo begonias (ubax) waa ku habboon yihiin.
Waa noocee bacriminta aad u baahan tahay inaad guriga ku sameyso?
Si loo hubiyo balsam ubax badan, inta lagu guda jiro qoorta ubaxyada iyo ubax ma isticmaalaan bacriminta nitrogen, waxay joojin kartaa abuurka ubaxa. Wakhtigan, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo doorbidaha Bacriminta fosfate-potassium. Haddii ciidda ay hodan ku tahay nitrogen, ka dibna waxay u badan tahay in balsamku leeyahay caleemo badan, laakiin waxaa jiri doona ubax yar. Marka biyaha lagu buufiyo, iska ilaali xiriirka ubaxyada - ku ilaali warqad.
Khaladaadka joogtada ah marka la waraabiyo iyo quudinta
MUHIIM! Balsam uma dulqaadanayo Bacriminta dabiiciga ah (tusaale ahaan, digada), carafka ubaxa waxaa lagu beddeli doonaa caleemo yar yar iyo daadinta burooyinkeeda.
Xeerarka waraabinta iyo quudinta ee daryeelka Vanka-qoyan:
oo leh limeeyaha limeey sababtoo ah isticmaalka biyo adag;
waxaa lagama maarmaan ah in la badalo qeyb ka mid ah ciidda;
Ha u oggolaanin dareeraha inaad gasho qoorta xididka dhirta by waraabiyo hareeraha dheriga;
xagaaga, biyaha warshad walba maalin kasta, jiilaalka, laba jeer toddobaadkii;
dhulka lagu qallajiyo dheriga "saboolnimada" waa wax aan la aqbali karin;
mararka qaarkood biyo ka daadi digsiga;
dhulka waa inuu mar walba qoyan yahay, ma qoyan;
balsam sida miisaanka maalin walba, gaar ahaan haddii heerkulka qolka uu ka sareeyo 20-22 ° C;
Waxaad quudin kartaa dhirta caafimaadka leh (waxaad ka ogaan kartaa cudurrada balsam iyo sida loo daaweeyo halkan).
ka dib marka la isu tallaalayo iyo inta lagu jiro xilliga jiilaalka balsam aan la karin;
xad-dhaaf ah nafaqooyinka ayaa halis u ah dhirta oo keenaysa dhimashadiisa;
inta jeer ee lagu quudiyo inta lagu jiro xilliga sii kordhaya - 1 mar 10 maalmood.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido macluumaad faa'iido leh oo faa'iido leh markaad sii kordheyso balsam:
Sidee u koraan balsam beerta laga bilaabo naftaada?
Noocyada iyo xeerarka loogu talagalay dhirta balsam ee guriga.
Dhammaan wax ku saabsan taranka barkimka?
Haddii aad weli soo qabatey bacriminta khaldan, ama ku xadgudbay amarrada diyaarinta, waa inaad isla markiiba joojiso quudinta by hab kasta. Qaado nasasho bil gudaheed, ka dibna sii wado habka caadiga ah, oo kaliya xulasho dheeraad ah oo ah quudinta. Haddii aad raacdo sharciyadan fudud ee daryeelka balsamine, dhirta quruxda badani waxay ku farxi doontaa indhaha labadaba guriga daaqadaha iyo beertaada.